MAQAAL:-Nabad Diidku Nabaddda ay diideen Waa Nabad caynkee ah? |
MAQAAL:-Nabad Diidku Nabaddda ay diideen Waa Nabad caynkee ah?
Waxaan akhriyay sheekadan aan idiin tarjumi doono oo uu qoray nin u dhashay dalka Jarmalka oo joogi jiray magaalada Muqdisho, xiliggii dowladdii Siyaad Barre, wuxuu aad u amaanayaa nabaddii iyo bilicdii magaalada Muqdisho xiligaas ka jirtay oo uu aad ula dhacsanaa oo shabahda wax badan midda taal dalalka reer galbeedka, waxaan arkay dabadeed Soomaali badan oo ugu riyaaqaysa maqaalkaas yar ee uu qoray weliba ku duceysanaysa in Allah nabadaaas oo kale u soo celiyo Soomaaliya!. waa nabadda ninka gaalka ahaa uu amaanay ee soo jiidatay bay ayagana la dhacsanaayeen oo ay u yaqaaniin bari samaadkii iwm!.
Haddaba sheekadii ninka Jarmalka ahaa aan idiin isoo gudbiyo anigoo ka samayn doona dhowr qodob oo u baahan is dul daag. Wuxuuna hadalkiisa ku billaabay :
“waxaan imid magaalda Muqdisho, November 1984, anigoo la socday ehelkeyga, waxaan jiray xiligaas 15 sano, aad baana u xiisanayay Soomaaliya markaas, aabahay wuxuu ahaa Injineer ka yimid Galbeedka Jarmalka, waxaan degnay guri wanaagsan oo ku yaala degmada Hodan, Muqdisho xiligaas aad bay u nabdoonayd habeenkiina waala isku socon jiray ayadoon wax baqdin ah haba yaraatee aysan jirin. dumarka waxay u labisnaayeen si reer magaalnimo ah ( caariyaad), Muqdisho xiligaas waxay ahayd mid ka mid ah magaalooyinka caalamka ugu bilicsan. magaaladu waxay lahayd Jaamacado heerkooda waxbarasho uu sareeyo, wadooyinkana wax qashin ah lagumaba arkaynin. waxaan waxbarasho ka bilaabay American School of Mogadisho, oo la geyn jiray caruurta ajnabiga Iskuulka ka dibna waxaan iska xaadirin jiray xeebta Liido, runtiina waxay ahayd Janno aduun uun.
Soomaalida deriska nala ahayd waxay ahaayeen dad aad noo wanaajinayay, waxayna noo sahleen joogitaankeena Soomaaliya. waxaana ku yeeshay xaafada Hodan saaxiibo badan, hase ahaatee afsoomaaliga maanan baran, inkastoo ay asxaabteydii isku dayeen inay i baraan. maalmaha fasaxa ee todobaadkana(weekend) waxaan booqan jiray Hotel Curuba oo lahaa night club aad u wanaagsan, Muqdisho xiligaas waxay lahayd meelo badan oo loo caweys tago sida Shaneemooyin, tiyaataro iwm. Qoyskeygu wuxuu ahaa Catholic, maalmaha Sabtida iyo Axadana waxaan aadi jiray kaniisada Catholic ugu weyn Afrika oo markaas ku tiilay magaalada Muqdisho, taasoo weliba kaabiga ku haysay Masjid.(waa masjidka Arbaca Rukun).
December 1990 ayaa waxaa inaga daabulay ciidamadii Maraykanka ka dib jabhadii mucaaradka ee USC soo weerartay magaalada Muqdisho, waxaan imid Soomaaliya 1984 ayadoo qurux badan oo nabdoon waxaana ka soo qaxay ayadoo gubanaysa oo ololeysa 1990, waxaana u rajaynayaa nabaddii iyo barwaaqadii ay ku jirtay inay dib u hesho”.
Haddaan ka sii ambaqaado halka uu Soomaaliya uga tagay, waxaa Nabad ugu horeysay iyo kala dambeyn markii ay soo baxeen kooxihii Islaamiyiinta ahaa, ka dib sanado dadkii ay ku jireen dil, dhac, boob, kufsi iyo barakicin oo beeshii caalamka kuwii isku sheegayayna ay ka sii jeesteen. waxaa soo baxday Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin oo dhul baaxad weyn oo dhaca koonfurta Soomaaliya ka tadbiiqisay Shareecada Islaamka, magaalooyin waaweyn sida Muqdisho, Marka, Baydhabo, Kismaayo, Balad-weyne, Xudur iyo deegaamo badan oo hoos yimaada. waxaa la gaaray ilaa heer dadkii ay ka dareeraan dukaamadoodii oo furan, ayagoo salaadda jameecada ku tukanaya Masaajidka, suuqyadii waxaa camiray dumar ayagoo xijaaban oo badidoodna niqaaban yihiin ay ganacsanayaan ayadoon wax fitno ah aysan jirin. waxaa gebi ahaanba la waayay oo la xiray goobihii fuxshiga sida tiyaatarada, naadiyadii lagu cawayn jiray ee ragga iyo dumarka is dhex gali jireen, shaneemooyinkii, baarararkii qamriga, haweenkii caariyaadkii ahaa. waxa kaliya oo dadka dhegahooda ku soo dhacaya wuxuu noqday wuxuu noqday Qur’aan, Muxaadaro, Aaadaanka Salaada iyo Nashiidooyin Islaami ah.
Haddaba nabadgelyadaas lagu helay shareecada Islaamka waxaanan u bogin Soomaalidii la dhacsanayd nabad gelyada gaalkaas uu amaanay wixii lagu qabay qaab nololeedkaas oo kale bay rajo ka qabeen inay dib u soo laabato, Soomaali badan oo qurbaha u hijrootay qaasatan wadamada reer galbeedka oo ku andacoonayay nabadgelyo daro awgeed inay wadankoodii uga soo qaxeen, nabadda ay waayeen waataa aan ka soo hadlay waxa ka carqaladoobayna waxay sii ambaqaadeen markay yimaadeen dhulalkii reer galbeedka waana kuwa ugu badan ee maanta ka soo horjeeda Mujaahidiinta Xarakatu Shabaab, xafladona ku soo dhoweeya camiil kasta oo ay gaaladu wadato. hadaad u fiirsotana waxay ku sheegayaan hadda nabadda taal magaalada Muqdisho waxaa astaan u ah Masawirrada laga soo qaaday xeebta Liido oo ay uga muuqato ruuxii muwaxxid ah fusqi badan iyo fitno. waxay ku gabadaan magaca “Qaran” sida inay dhahaanmar walba waxaan rabnaa Soomaaliya in qaranimadeedii dib u soo laabato oo ka dhigan xaqiiqdii in qurunkii dib loogu laabto.
Suurto gal mahan Soomaaliya inay ku laabato xiligaas ay gocanayaan dadkan, maantana waxbadan baa is bedeay dhallin badana baa dhiigoodii u daadisay oo u shahiiday hirgalinta Sharciga Allah iyo ka hortaga hab u noolaanshahaas muddo lagu soo jiray ee ilowsiiyay dadkii wixii Allah SW uu koonka u keenay inuu dib u soo laabto. maanta dadkii waxaa ku kor hardamaya nidaam doonaya in uu u furo albaabadii sharta (dadka u fududeeya dunuubtii) kana hor istaaga kheyrkii ku hogaamin lahaa ridhaha Allah iyo Janada iyo nidaamka Shareecada islaamka oo soo xiraysa dhamaan iriridaha sharta kheyrkiina qofkii uu u fududaanayo taasoo Allah raali ahaanshihiisa iyo Janadada inuu galo sababaysa. way cadahay mida danta ku jirto labadaas. Allah ha guuleysiiyo dhalinta u taagan inay taas xaqiijiyaan ee hortaagan sharta.
W/Q : Abuu Badriya.